DataNumen: Malunga DataNumen
Ikhaya malunga DataNumen
Eyilwe kwi2001, DataNumen, Inc yamkelwe njengenkokeli yehlabathi kubuchwephesha bokubuyisa idatha. Sithengise isoftware yethu yokuphumelela ukubuyisa idatha kumazwe angaphezu kwe-130 nakumashishini amaninzi amakhulu emhlabeni, kubandakanya i-AT & T Global Network Services, General Electric Co, IBM, HP, Dell Inc., Motorola Inc., The Procter Kunye neGamble Co, iFedEx Corp, iXerox Corp, iToyota Motor Corp kunye Okuninzi nokuninzi.
Sikwabonelela isoftware yophuhliso lwesoftware (SDK) kubaphuhlisi ukuze bakwazi ukudibanisa iitekhnoloji zethu zokufumana idatha ezingalinganiyo kwisoftware yazo ngaphandle komthungo.
Umsebenzi ophambili we DataNumen, Inc. Kukufumana kwakhona idatha eninzi ukusuka kwiintlekele zedatha ezingachazwanga kangangoko kunokwenzeka. Ngobuchwephesha bethu obuphambili, sizama ukufumana ezona zisombululo zibalaseleyo kubaxumi bethu kwaye sinciphise ilahleko kurhwaphilizo lwedatha ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ezinje ngokusilela kwentsimbi, ukungasebenzi kakuhle kwabantu, iintsholongwane okanye uhlaselo.
DataNumen, Inc. yenziwe liqela leengcali ezifumana kwakhona idatha eneemfuno ezahlukeneyo. Siliqela eliselula elinemibono emitsha ezinikele ekuveliseni eyona software iphambili yokufumana kwakhona emhlabeni.
26 / F., Inqaba entle yeQela
Suite 791, 77 eConnaught Road
20 UMartin Place, Suite 532
iYurophu DataNumen, Inc.
1 iTrafalgar Square, Suite 290
ILondon, iWC2N 5BW
IBahnhofstraße 38, Suite 153
amantla Emelika DataNumen, Inc.
I-3422 Old Capitol Trail, Suite 1304